इपिएस पास गरेको तीन वर्ष बित्यो, अझै कोरिया जान पाईएन ! – korea pati
May 7, 2020 Korea patiLeaveaComment on इपिएस पास गरेको तीन वर्ष बित्यो, अझै कोरिया जान पाईएन !
काठमाडौं । बैदेशिक राेजगारका लागि सबैभन्दा बढि रुचाइएकाे देश हो दक्षिण काेरीया।प्रत्येक बर्ष भाषा परिक्षा गराएर दक्षिण काेरियाले नेपाली कामदारहरु लगिरहेकाे छ। झट्ट हेर्दा यो असाध्यै राम्रो देखिन्छ ।तर यसभित्र खाेतल्दै जाने हाे भने भयावह अवस्था पनि छ। नेपाल सरकारले काेरीया सरकारसँग समन्वय गरेर प्रत्येक बर्ष भाषा परीक्षा गराउँछ । जुन परिक्षामा ७० देखि ९० हजार सम्मकाे
हाराहारीमा परिक्षार्थिहरु समावेश हुने गर्छन् । जुन भाषा परिक्षाकाे दस्तुर प्रत्येक वर्ष २४ डलर प्रति परिक्षार्थिले तिर्नुपर्ने हुन्छ। भाषा सिकेको दस्तुर देखि परीक्षा सम्म आइपुग्दा एउटा परिक्षार्थिकाे अन्दाजि कम्तिमा ५० हजार सम्म खर्च हुने देखिन्छ। समय झन्डै २ वर्ष कम्तिमा लाग्छ ।तर यसलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थापन
नगरिदिँदा हजारौं भाषा पास गरेर बसेका युवायुवतिहरु विचलित भएको अवस्था छ। सन २०१७ मा भाषा पास गरि सबै प्रक्रिया सकेर भिसा कुरेर बसेका युवायुवतीहरुकाे राेस्टर अवधि सकिनै लागेकाे छ ।तर यस विषयमा नेपाल सरकारकाे कुनै चासो भएको पाइँदैन । बेरोजगार युवायुवतीले भाषा पास गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काेरीया जानका लागि ३ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने यो कस्तो अवस्था हाे त ? यो अाफैमा अत्यास लाग्दााे अवस्था हो । यसै विषयमा EPS पास गरेर पनि काेरीया जान नपाएका पिडित युवाहरुले हामीलाई पठाउनु भएको पत्र जस्ताको तस्तै ।
प्रस्तुत बिषयमा रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS ) मार्फत नेपालबाट रोजगारीको लागि दक्षिण कोरिया जानका निम्ति भाषा परिक्षाद्वारा कामदार छनौट गरि नेपाल सरकार मार्फत पठाइरहेको कुरा हजुरहरुलाई विधितनै छ । नेपालमा बर्सेनि परिक्षा लिने अनि धेरैलाई उतिर्ण बनाएर लामो समय कुर्न लगाउने गर्नाले नेपाल सरकारले हजारौं यूवाहरुको भबिस्यमाथी नै खेलवाड गरेको देखिन्छ । साथै, सन् २०१७ मा ई.पी.एस. भाषा परिक्षा उतिर्ण भई सबै पक्षमा योग्य ठहराएता पनि हामी बर्षौँ कुर्दा समेत द.कोरिया जान पाइरहेको छैन ।अत्यन्तै मेहनतले पास त गरियो तर पनि पास भएको तीन- तीन बर्षको पर्खाइमा पनि इसु नभई बिडम्बना जो बढिमा २ बर्ष मात्र योग्य सुची अर्थात रोष्टरबाट अहिले फालिदैछन २०१७ का एगृ तर्फ र औद्योगिकमा महिलाहरूको इसु दुई बर्षभित्र सेरियली रुपमा हुँदैगर्दा, हाम्रो डकुमेन्ट ढिला एप्रुभ हुने अहिले आएर April र May को करिब ८००-१००० जति इसु ( कामदार जारी) हुन बाँकी भएकाहरुको रोष्टर पनि यो May, २०२० बाट सकिन्दैछ ।
साथमा घरखेत बेचेर धेरै खर्च पनि भयो त्यतिले समेत नपुगेर ऋण काढेर खर्च गरियो अहिले घर न घाटको भइयो । कुर्नुको पनि सिमा हुन्छ । २०१८ का कृषिका पनि बाकी नै छन् र २०१९ मा सोही कृषि कोटाको लागि करिब २८०० जनाले सीप परिक्षा दिएका छन । यसरी हामी गरीब जनताका छोराछोरीलाई आँखामा छारो हालिरहदा ईपीएस कार्यालय ग्वार्को मुक्दर्शक बनेर बसिरहेको छ । समग्र ईपीएस प्रणालीमा यति धेरै किन बेथिति ? हजारौंको भबिस्यमा खेलबाड गरेर १/२ जनाको भबिस्य बनाउनु औचित्य कतिको रहला ? हामी अत्यन्तै मर्माहत छौँ ।“कोरिया भाषा पास गर्नु कोरिया जानू ग्यारेन्टी होइन” थाहा छ । तर कोरिया लैजाने सपना देखाएर नलैजान पाइएला र ? यो अवस्थामा HRD Korea मा ध्यानाकर्षण गराई पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा ईपीएस नेपाल गैरजिम्मेवारी देखिन्छ ।
हामी गाउँघरबाट बाबा आमालाई पैसा खोज्न लगाएर ब्याजमा ऋण काढेर लाखौं खर्च गरेर एक छाक खाईनखाई मेहनत गरेर कोरियन भाषा पास भएर जान पाइदैन भने किन प्रत्येक बर्ष गरीब दुखी जनताका छोराछोरीलाई मानसिक यातना दिएर डिप्रेशनको सिकार बनाउन खोजिदैछ । पढदै गरेको पढाइ छोडियो । घर न घाटको भइयो ।पक्कै पनि यस बिषयमा गम्भीर भई सम्बन्धित निकायलाई घच्घचाउनुका साथै ध्यानाकर्षण गराई हामी ईपीएस पीडितको समस्या समाधान गरिदिनहुन हार्दिक विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछौं ।
हाम्रो मागहरु –१)२०१७ का सबै पासरहरुको रोष्टर डेट १ बर्ष थप गरियोस,२) ई.पी.एस. प्रक्रियामा सामेल भई पुर्णरुपमा योग्य पासरलाई कोरिया लाने ग्यारेन्टी दिइयोस ।३) २०२०/२०२१ को कृषि कोटा बन्द गरि पहिलोलाई प्राथमिक दिइयोस ।४) ०१७/ को मेनुतर्फका पासर महिलाहरुलाई २०२० को मेनु कोटामा समाबेश गरिराइयोस ।५)भाषा उतिर्ण गराउदा आबश्यक मात्रामा मात्रै उतिर्ण गराईयोस ।
हाम्रो गुनासोहरु:-(१) यदि पासर हरु सबै लान नसक्ने भए किन आवस्यक भन्दा बढी पास गराईयो?(२) अघिल्लो वर्ष पास भएका योग्य युवाहरु धेरै हुँदा हुँदै किन पुन परिक्षा गरियो ? यो सबै ई,पि,एस नेपालको समन्वय मा हुने काम हो,।(३)अहिलेको अवस्था हेर्दा May र April महिना भन्दा अगाडि Approve भएकाहरुको मात्र बढी issued भयो May”April पछाडि Approve भएकाहरुको किन भएन यो प्रकृयामा कस्को जिम्मेवारी हुन्छ HRD Korea अथवा, EPS Nepal कस्को दायित्व हुन्छ?(४) यदि हामी कोरिया जान नपाउने हो भने अहिले सम्मको खर्च,समयको मुल्यांकन, हाम्रो मेहनतको मुल्यांकन कस्ले गर्ने ?यी सम्पुर्ण कुरालाई मध्यनजर गरेर हाम्रो जायज मागहरु छिट्टै सम्बोधन गरियोस अन्याथा हामीलाई आन्दोलन /धर्ना वा जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य नपारियोस ।संयोजाक:- रोसन राई,निवेदक;ईपीएस पीडित नेपाल, ईपीएस पासर २०१७ (एगृ तर्फ )
कोरियन एयरले कोरोनाका कारण स्थगित भएका अन्तरास्ट्रिय उडान जुन १ बाट सुचारु गर्ने !
उत्तर कोरियाले ब’न्धक बनाएको अमेरिकी बिद्यार्थीलाई २३ मिलियन डलर क्षतिपुर्ति दिन आदेश